केसीकाे अवस्था जटिल, बाेल्न समेत छाडे - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
केसीकाे अवस्था जटिल, बाेल्न समेत छाडे
मङ्लबार, माघ १५, २०७५ (January 29, 2019, 8:57 am) मा प्रकाशित
मङ्लबार, माघ १५, २०७५, ।
काठमाडाैं । उनी आँखा चिम्लेर पल्टिरहन्छन् । कोही भेट्न आउँदा पुलुक्क हेर्छन् । गल्दै गएपछि फेरि आँखा बन्द गर्छन । आगन्तुकहरु हेरेरै फर्किन्छन् ।
२० दिनदेखि अनशनतर डा. गोविन्द केसीको मुटुको समस्या बढ्दै गएको छ । उनको दुई पटक एन्जियोग्राम गरिसककिएको छ । उनको शरीर कमजोर बन्दै गएको छ । बोलीसमेत निस्किदैन् । मुस्किलले साउती गर्छन् । परेता पाट्टिएका छन् । तर, ६३ वर्षीय केसीले औषधी खान मानेका छैनन् ।
नजिक आउने चिकित्सकलाई उनी इसारा गर्छन् । उनको इसारा र मनस्थिती बुझेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । केसीका अवस्था जटिल हुँदै गइरहेको उपचारमा संलग्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञा डा. प्रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।